Basic uye nheyo yekudzidzira kupisa, chii chinonzi kupisa
Plastiki Kugadzira Machina
Induction kupisa boiler
Bvunza An Inquiry
The basic of induction heating principle zvakanzwisiswa uye zvinoshandiswa pakugadzira kubva ku1920s. Munguva yeHondo Yenyika II, teknolojia yakakurumidza kugadzirisa nguva inoda nguva yehondo yezvinodiwa zvekutsanya, kutendeseka kunomesa midziyo injini yesimbi. Munguva pfupi yapfuura, kutarisa kwemaitiro ekugadzira zvakasimba uye kusimbiswa pakuvandudzwa kwehutano hwehutungamiri kwakakonzera kuwanikwa zvakare kwekombiyuta yekunyora, pamwe nekufambiswa kwakanyatsogadziriswa, yose yakasimba induction heat power supplies.
Induction Kuchenesa inowanikwa mune chinhu chinogadzirisa magetsi (kwete magnetic steel) kana chinhu chacho chiiswa panzvimbo dzakasiyana-siyana. Induction Kutya inokonzerwa ne hysteresis uye eddy-ikozvino kurasikirwa.
Kurasikirwa kweHysteresis kunoitika chete mune zvemagineti zvinhu simbi, nickel, uye nevamwe vashoma. Kurasikirwa kweHysteresis kunotaura kuti izvi zvinokonzerwa nekukakavadzana pakati pemamorekuru kana izvo zvinhu zvikave nemagineti kutanga mune imwe nzira, uyezve kune imwe. Mamorekuru anogona kutariswa semagineti madiki anotendeuka nekutendeuka kwese kwekutungamira kwemagineti. Basa (simba) rinodikanwa kuvashandura. Simba rinoshanduka kuita kupisa. Iyo mwero wekushandisa kwesimba (simba) inowedzera neakawedzera mwero wekudzosera (frequency).
Eddy-ikozvino kurasikirwa kunoitika mune chero kuitisa zvinhu mune akasiyana magineti shamba. Izvi zvinokonzeresa musoro, kunyangwe kana izvo zvinhu zvisina chero zvemagineti zvimiro zvinowanzo kuve zvine hukama nesimbi nesimbi. Mienzaniso imhangura, ndarira, aluminium, zirconium, isina magineti simbi isina chinhu, uye uranium. Eddy currents ndiwo magetsi emagetsi anoitiswa neshanduko chiito mune izvo zvinhu. Sekureva kwezita ravo, vanoita kunge vanoyerera vachipoterera pane eddies mukati mesimba rezvinhu. Eddy-yazvino kurasikirwa kwakanyanya kukosha kupfuura kurasikirwa kwehysteresis mukudziisa induction. Ziva kuti kupisa induction kunoiswa kune zvisiri zvemagineti zvinhu, uko pasina kurasikirwa kwehysteresis kunoitika.
Nekudziya kwesimbi yekuomesa, kuumba, kusungunuka, kana zvimwe zvinangwa zvinoda kutonhora pamusoro pekushisa kweCurie, hatigoni kuvimba ne hysteresis. Sirasi inoshaya magnetic yayo pamusoro pekushisa uku. Apo simbi inopisa pasi peCurie point, mupiro we hysteresis inowanzoita shoma zvokuti inogona kuregererwa. Nokuda kwezvinangwa zvose, I2R yemvura yakasviba ndiyo nzira chete iyo magetsi emagetsi inogona kushandurwa kuva kupisa kwechinangwa chokupisa.
Zvinhu zviviri zvakakosha zvekutsvaira kwekugadzirira kuitika:
A kuchinja magnetic field
Anogadzirwa nemagetsi anoiswa mumagnetic field
zvinyorwa zvekutengesa kupisa
Kero: Nhamba 12, Jingtai Street, Xianxi, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China, 523859
induction fluid pombi hita
induction heat thermal conductive oiri system
induction heat diffusion pombi ine electromagnetic hita
Electromagnetic Induction Steam jenareta
musimboti we electromagnetic induction heat
evaporate mvura boiler ine induction heat
Handbook of induction heat eddy current
Zvishandiso uye Zvakanakira zveInduction Heating Steam
electromagentic induction steam boiler ine touch screen
Stainless Simbi Reactor Heating Induction
induction thermal fluid pombi hita
induction heat yekuomesa chikafu mu rotary dhiramu
Induction inopisa thermal conductive mafuta boiler
diffusion pombi induction heater ine simba rekuchengetedza uye kumhanya kwakanyanya
© 2022 HLQ KUDZIDZISA KUNYANYA KUSHANDISA MITI MUDZIMAI